Teratany Rosiana Nogadraina Fa Naka Sary Polisy Nisambotra Vehivavy Nisalotra Hijab Tao Tajikistan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Mey 2016 6:21 GMT
Ampahany tamin'ny lahatsary nisy ireo polisy nisambotra vehivavy nisalotra hijab tao an-tanànan'i Isfara, Tajikistan tamin'ny Febroary 2016
Mandrapahatongan'ny taona ho avy, tsy hiverina any Rosia intsony ilay teratany Rosiana Oqil Sharifov, izay niverina nody tany an-tanindrazany Tajikistan , Sovietika teo aloha, rehefa avy niala sasatra, taorian'ny nanamelohan'ny fitsaràna any an-toerana ity lehilahy 31 taona ity higadra an-tranomaizina noho ny nandraketany lahatsary ny zavatra heveriny ho fanitsakitsahan'ny polisy ao an-toerana ny zo Islamika hisalotra hijab.
Vetivety foana ilay ampahan-dahatsaryr tamin'ny Febroary nahitàna ilay polisy nisambotra vehivavy roa mpanao fanatanjahanatena, nisalotra hijab, dia nahazo làka tao amin'ny tambajotra sosialy Rosiana Odnoklassniki sy YouTube, nahatezitra ireo olontsotra Tajiks tao amin'ilay firenena izay Miozolmana no ankamaroany, ary nahasarika ny sain'ireo manampahefana ao an-toerana nampangaina ho manao fampielezankevitra manohitra ny finoana Silamo.
Nampangaina ilay lehilahy ho “manao fihantsiana fifandrafiana miainga amin'ny nasionalisma, faritra, sy finoana” ary nohelohina tamin'ny 26 May.
Nomarihan'ny mpisolovava an'i Sharifov fa nampifandraisin'ny fampanoavana tamin'ny “hetsika ara-kolontsaina” nisy tao an-tanàna tamin'io fotoana io ireo fisamborana nataon'ny polisy.
Iray amin'ireo Tajiks anjatony mivezivezy mankany Rosia hitady asa araka ny vanim-potoana Ing. Sharifov. Toy ny maro hafa, vitany ny nahazo zompirenena tany.
Any avaratr'i Tajikistana no misy an'i Isfara tanàna fonenany, ary fantatra ho iray amin'ireo faritra fatra-pivavaka indrindra ao Azia Afovoany.
Andro vitsy taorian'ny niverenany avy niala sasatra dia namokatra ity lahatsary ity tamin'ny alàlan'ny findainy avo lenta izy.
Miteny ao anatin'ny fakantsary ny iray amin'ireo vehivavy voatàna hoe noho izy ireo nitafy hijab no nisamborana azy.
Sady maka sary i Sharifov no maneho hevitra:
Jereo ity. Fandraràna ny hijab. Izao ny governemanta !
Ireo Tajik mpampiasa YouTube no tena nanahy kokoa amin'ny resaka fanampenam-bava ny ara-pivavahana fa tsy izay hanjo ny fanaovangazetin'olontsotra.
Lyudmila Azanova naneho hevitra hoe :
Dia avy eo ry zareo gaga rehefa mandeha manatevina ny ISIS ny olona.
Fa indrindra indrindra, nahatezitra izao tontolo izao ny nitanisan'ilay minisitry ny atitany taloha, kôlônely Gulmurod Halimov, tamin'ny nialàny an-daharana tao Tajikistan handeha hanatevina ny ISIS tany Syria tamin'ny taona lasa, ireo politika laika mahery setran'ny governemanta mamely ny finoana Silamo ho toy ny antony fototra nahatonga azy hiala an-daharana.
Na teo aza io, nitohy hatrany ny famelezana ireo fihetsiketsehan'ny vahoaka mikasika ny finoana Silamo.
Sambany tamin'ity taona ity ny governemanta Amerikàna no nampiditra an'i Tajikistan ho ao anatin'ny lisitra nataony momba ireo sangany amin'ny fanitsakitsahana ny fahalalahana ara-pinoana; faritana amin'ny hoe “firenena mampiahiahy manokana” taorian'ny fanokafana ilay tatitra momba ny fahalalahana ara-pinoana.
Ho fanampin'ilay fandraràna mandeha ho azy manjo ny hijabs (tsy misy lalàna mandràra ny olona iray tsy hitafy iray amin'io), voarakitra ihany koa ireo polisy manapaka an-terisetra ny volombavan'ireo mpino, raha i Tajikistan no hany firenena tokana eto an-tany mandràra ny tsy ampy taona tsy hahazo hiditra hanaraka fotoam-bavaka any anaty maoske.
Amin'izao fotoana izao, ampolony ireo mpitarika ny antoko iray mifototra amin'ny finoana, noraisina be ho malefa-pihetsika, saingy nataon'ny governemanta hoe mpandika lalàna satria mbola eo am-piandrasana valim-pitsaràna ireo mahery fihetsika nampangaina ho nanao asa fampihorohoroana tamin'ny taona lasa.
Nangatahan'ny mpampanoa lalàna avy amin'ny fanjakàna ny fanamelohana ho faty ho an'ny maro amin'ireo mpitarika ny Antokon'ny Fanavaozana Islamika ao Tajikistan, izay tsy naharesy lahatra mihitsy ny filazan'ny governemanta momba ny fisian'ny fifandraisany amin'ilay lazaina fa firaisana tsikombakomba tamin'ny Septambra.